I-Instagram Checkout manje isetshenziswa yiwo wonke amabhizinisi afanelekile e-US futhi izongena emhlabeni wonke kungekudala.
Isici se-Checkout sisivumela ukuthi sithenge imikhiqizo ngqo kusuka kuhlelo lwethu lokusebenza lwe-Insta. Kusuka manje, singabeka ama-oda ethu ngqo ku-Insta lapho sihlola okuthunyelwe okungathengwa ngamathegi wethu omkhiqizo owathandayo.
Ngokusho kwe-Instagram, 130 millions d’utilisateurs cliquent chaque mois sur des posts shoppable, futhi akumangazi ukuthi i-Instagram manje isibeke lo msebenzi ” Hlola ” itholakale kuwo wonke amabhizinisi ase-United States.
Ukwanda kokuthandwa kwe- “okuthunyelwe okungathengwa” iguqule ngokushesha i-Insta yaba ipulatifomu ye-e-commerce. Isici se-Checkout manje sizogcwalisa lolu shintsho futhi sithuthukise ulwazi lomsebenzisi lube ngcono.
Manje sesingakwazi ukuthepha ithegi yomkhiqizo esiyithandayo bese sikhokha ngqo ku-Instagram ngalowo mkhiqizo. Inqubo yethu yokuthenga ayikaze ibe lula kunoma iyiphi enye inkundla yezokuxhumana.
Bayishintshe ngokuphelele indlela esithenga ngayo futhi bashintsha indlela izinkampani ezisebenzisa ngayo isitolo sabo se-Insta..
Okwabaninimabhizinisi, amandla okuguqula ngokushesha izithameli zabo zisuka ekuphequluleni ziye kwimikhiqizo yokuthenga ngaphandle kokushiya imiphumela yohlelo lokusebenza lwe-Instagram kumanani akhuphukile okuthengisa.
Amabhizinisi, i abagqugquzeli futhi abasebenzisi bazothola izikhathi ezithokozisayo ngokusebenza kokukhokha.
Kufanele usebenzise i-Instagram Checkout?
Abaningi bethu basebenzise ipulatifomu ye-Insta ukumaketha nokukhangisa iminyaka eminingana manje., futhi siyazi ngokubaluleka okube nakho kumasu ethu wokumaketha.
Kepha izinguquko zakamuva zonyaka odlule zilwakha kabusha ngokuphelele lolu hlelo lokusebenza.. Akufanele kusaba yindawo nje yokukhangisa.
Isici se-Instagram Checkout sinikeza amakhasimende ethu ipulatifomu elula, lapho bengathenga khona imikhiqizo yethu.
Kulo nyaka, I-Instagram izamile ukwamukela amabhizinisi nemikhiqizo ngangokunokwenzeka ngalolu bhubhane.
Benza ukusebenza kwesitolo jikelele futhi bakhipha ikhodi ye-QR ukusisiza ukuthi sikhulise ibhizinisi lethu ku-Insta.
Kubikwe i-Instagram que 80 % des comptes suivent un compte d’entreprise, okuchaza ngokusobala ukuthi kungani basebenze kanzima ukuqinisekisa ukuthi singazuza kakhulu kungxenyekazi yethu.
Nakhu ukuthi abasebenzisi bangathenga kanjani imikhiqizo yethu ngezinyathelo ezimbalwa ezilula:
• Chofoza kusithonjana sokuthenga
• Chofoza umkhiqizo ukhonjisiwe
• Thepha kwirejista yemali
• Faka imininingwane yekhadi nolwazi lokukhokha
• Chofoza ku-oda lendawo
Ungasifaka kanjani isicelo se-Instagram Checkout?
Ungasebenzisa i-Instagram Checkout njengamanje e-United States, kepha kufanele uqale ulungiselele isitolo sakho.
I-akhawunti yakho ngakho-ke ixhunywe ekhasini lakho le-Facebook noma ku-Shopify, lapho i-Insta ingabuyisa khona ikhathalogi yakho nemininingwane yomkhiqizo.
I-Insta isebenzisa imininingwane yakho ukudala amalebula wakho womkhiqizo ukuze umake imikhiqizo yakho ezithombeni zakho, amavidiyo ne-IGTV manje.
Ngemuva kokusetha ngempumelelo isitolo sakho, ungasebenzisa leli fomu lapha ukucela i-Checkout.
Uma ungekho e-United States, lungela bese udala isitolo sakho. Qalisa ukusebenzisa ukusebenza kokukhokha ngokushesha nje lapho kufakwa emhlabeni jikelele.
Ungakuthola kanjani okuningi kwirejista yakho yemali
Sineziphakamiso ezimbalwa ongazisebenzisa kakhulu kusici sakho se-Instagram Checkout., futhi ngale ndlela, ungaqiniseka ukuthi ukwandisa ukuthengisa kwakho futhi.
1. Cabanga ukumaka imikhiqizo yakho kuwo wonke amafomethi wokuqukethwe
Ungakhawuleli amalebula akho uma ufuna ukukhulisa ukuthengisa kwakho. Khumbula njalo ukumaka imikhiqizo yakho kufomethi ngayinye yokuqukethwe. Thola okuningi ezithombeni nakumavidiyo.
Ngokwakha amathegi kumafomethi wokuqukethwe ahlukile, uqinisekisa ukuthi ufinyelela kubantu abaningi ngangokunokwenzeka ababuka okuqukethwe kwakho.
Lapho imikhiqizo yakho ibonakala kakhulu, kulula ukuthi izethameli zakho zikubone futhi zithenge kuwe ngokusebenzisa isici sokuphuma.
2. Ukubambisana nabathonya
Abagqugquzeli bakhulu, futhi bayathandwa kakhulu ngabalandeli babo. Kufanele sibanikeze udumo ngoba bakwenza kahle abakwenzayo.
Abaningi babo baphumelele ekuqhubekeni ngokuqhubekayo nokwakha amapulatifomu abo ngokubandakanya nokukhiqiza okuqukethwe koqobo kubalandeli babo abathembekile.. Yile ndlela abaziphilisa ngayo, ngakho-ke kumele bazi into eyodwa noma ezimbili.
Ngokusebenzisana nabathonya nabanikazi bama-akhawunti wabadali abangakwazi futhi ukumaka imikhiqizo ngqo kokuqukethwe kwabo, ungakhangisa imikhiqizo yakho ngokuhlukumezeka kakhulu kungxenyekazi yabo, kodwa ngendlela eyiqiniso.
Hhayi kuphela ukuthi imikhiqizo yakho izobonwa ngokushesha okukhulu ngabalandeli bayo, kodwa futhi kuyindlela ehlakaniphile yokuzikhangisa, ngaphandle kokuzama ukuthengisa imikhiqizo yakho ngqo.
3. Sebenzisa ama-carousels
Sebenzisa ama-carousels wemikhiqizo yakho kungafinyelela izithameli zakho ngokushesha, kodwa ngempumelelo. Ukuthokozisa okubukekayo izithombe zemikhiqizo yakho, kuzoba lula ukudonsa ukunaka kwezilaleli zakho.
Yiba nobuciko futhi udale izithombe ngeminye yemikhiqizo yakho. Ngale ndlela, awukwazi ukumaka kuphela imikhiqizo embalwa kokuqukethwe okukodwa, kodwa futhi nokuveza le mikhiqizo ndawonye futhi ngokushesha okukhulu.
Imisebenzi yokugcina nokukhokha iguqula i-Insta ngokushesha ibe yipulatifomu enkulu kunangaphambili. Qiniseka ukuthi uhlala ubukele futhi uzijwayeze ngazo zonke izici ezikhona nezintsha ezikhishwayo..
Ithimba le-Instagram lisebenze kanzima kule minyaka embalwa edlule ukuhlangabezana nezidingo zakho nokulindelwe, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzisebenzisa ngokugcwele zonke izinzuzo okufanele uzinikeze.
Article précédentIGTV Shopping isiyatholakala ku-Instagram
Article suivantI-Auto Like Instagram: I-Bot Yokuthandwa Okuzenzakalelayo